Home Wararka Dhaawaca & dhimashada dagaalka Galmudug oo sii badanaya & ciidanka labada dhinac...
Dhaawaca & dhimashada dagaalka Galmudug oo sii badanaya & ciidanka labada dhinac oo isku hub-aruursanaya
Sida ay sheegayaan Wararka naga soo gaarayo Galmudug, Ku dhawaad 10 askari oo ay ku jiraan saraakiil ayaa ku dhimatay dagaal xooggan oo ka qarxay degaanka Bahool, oo qiyaastii 35-KM dhanka waqooyi uga beegan Dhuusamareeb, oo ah xarunta maamulka Galmudug.
Wararka waxa ay intaa ku darayaan in dhimasha intaa ka badan tahay madaama dagaalka uu ka dhacay goobo kala duwan.
Tiro dhaawacyo ah ayaa la gaarsiiyay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel iyo dowlad-goboleedka Galmudug sida ay saraakiisha Caafimaadka u sheegeen Warbaahinta . Siday xaqiijiyeen saraakiisha amaanka goobta lagu dagaalamay ee Bohol waxa hada ku sugan Ciidanka Ahlusunna halka kuwa dowladda ay dib uga gurteen deegaan duleedka ka ah goobta lagu dagaalamay.
Ciidanka Ahlusunna ayaa qabsaday labo Gaari oo Ciidamadda dowladdu la haayeen kuwaa oo kala Cabdi Bile iyo Beebe sida ay ku warantay warbaahinta Galguduud ee ka howlgasha deegaanada maamulka Galmudug.
“Xaaladda deegaanka waa ay dagantahay waxaa socda abaabul xooggan oo ay laba dhinac wadaan” ayaa sarkaal ka tirsan Milatariga Soomaaliya sheegay.